Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex u-Rufina II no III Merlo Centric - I-Airbnb
Iiflethi okanye izindlu ezikwicomplex u-Rufina II no III Merlo Centric
Ikhaya leholide yonke sinombuki zindwendwe onguDebora
I-Rufina II kunye ne III eyenzelwe ngokukhethekileyo iindwendwe ukuba zizive zisekhaya. Itofotofo kwaye iqaqambile. Ixhotyiswe ngeenkcukacha ezintle. Iyunithi nganye inamagumbi okulala amabini, ibhedi elala abantu ababini enye, enye ineebhedi ezimbini zonke. Igumbi lokuhlala, ibhalkhoni nendawo yokoja. Yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo bafuna ukonwabela iMerlo. Sizama ukwenza ukuhlala kwakho kube yinto engalibalekiyo. Indawo ekuyo ilungile kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukusuka eAvenida del Sol. Konke ngezandla.
Iqaqambe, ifudumele kwaye ihonjiswe ngeenkcukacha ukwenzela ukuba ukuhlala kwakho kungalibaleki. Indawo ekuyo yenza kube ngcono nangakumbi. Sicinga ukuba siza kumangalisa iindwendwe zethu ngeengenelo ezikhethekileyo. Indawo yam iza kuba YINDAWO yakho. Ime embindini wedolophu yaseMerlo iimitha eziyi-15 ukusuka eAvenida del Sol, eyona avenue yesixeko, apho kukho eyona ndawo inkulu yokutya, iikhefi, iibhari, i-casino, njl njl. Ikude ngeemitha ezimbalwa yindawo yokuthenga enevenkile enkulu, igumbi leemuvi njl njl. Ibe phambi kweyona bhiya ibalulekileyo kunye neenqwelo zokutya kule ndawo. Inkonzo yethu iyasebenzisana neqela lehotele, nto leyo eyenza iindwendwe zethu zonwabele iipaki neepuli zehotele, ezikumgama weemitha eziyi-100 ukusuka "kwindawo yam eseMerlo".
I-Merlo yindawo ekhethekileyo. Indalo yayo iyamangalisa. "Indawo yam" isemgangathweni, ikufuphi kwinto yonke ukuze wonwabele izinto onokuzonwabela ezingalibalekiyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Debora
Ungandifumana nanini na. Ndifuna ukwenza into yakho enokonwatyelwa kwindawo yam yahluke. Uza kufumana iingenelo ezikhethekileyo zokuphila eMerlo. I-Bouchers yokhenketho lwesixeko, iivenkile zokutyela, imini yelizwe, iikhefi, njl.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Villa de Merlo